စမတ်မြို့သည် LED ဗီဒီယိုကြော်ငြာမျက်နှာပြင်နံရံ၏လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအားပေးသည် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်နှင့်အစဉ်အလာ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်တို့အကြားနှိုင်းယှဉ်မှုအကြောင်းပြောဆိုကြပါစို့
1. ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု LED ငှားရမ်းကြော်ငြာ display ကို အနိမ့်နှင့်အနိမ့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိမှုပိုပိုဖြစ်လာသည်
ရိုးရာ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်အမှတ် P5 မှ p37.5 အထိအကွာအဝေး, မျက်နှာပြင်ပိုကြီးသည်, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသာ. အစောပိုင်း install လုပ်ထားသောဖန်သားပြင်, ဘာလို့လဲဆိုတော့ထုတ်ကုန်စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်တဲ့နည်းပညာကမရင့်ကျက်သေးဘူး, စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲမှု, ယခုတွင်မူ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များကိုစံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်, စံပြ, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု, ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုရင့်ကျက်တဲ့စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့, နောက်ဆုံးပေါ် display ကိုသုံးနိုင်သည်, ပါဝါချွေတာခြင်းနှင့် induction ညှိနှိုင်းမှုနည်းပညာ, ယူနစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနိမ့်သည်, နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအားပိုမိုစွမ်းအင်ချွေတာမှုအရအလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည်.
ရိုးရာ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်သည်သီးခြားတီဗွီကြီးတစ်ခုနှင့်တူသည်, မန်နေဂျာများသည်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနည်းလမ်းများဖြင့်သာမျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းကိုသာထိန်းချုပ်နိုင်သည်. ယခု LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်သည် terminal ကိုနားလည်နိုင်ပြီဖြစ်သည်. ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကြီးမားသောစပျစ်သီးပြွတ်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်, ဆိပ်ကမ်းများ၏နံပါတ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်. မန်နေဂျာသည်ပလက်ဖောင်းများအားထိန်းချုပ်မှုပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်အဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်သည်. ပရိသတ်သည်ပြပွဲ၏အကြောင်းအရာများကိုနေရာများစွာတွင်ကြည့်နိုင်သည်. ၎င်းသည်ကွန်ရက်နှင့်စနစ်တကျဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အရာသုံးရှုထောင်ဆက်သွယ်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်.
ရိုးရာ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်သည်ကြော်ငြာတွင်တစ်ဖက်သတ်တိုးတက်နေ. ယခုအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်သည်သက်ရှိထင်ရှားဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်. ဥပမာ, လေယာဉ်ပြေးလမ်းကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်, ဦး ဆောင်မိုဘိုင်းဖုန်း, အမှိုက်သရိုက်လုပ်နိုင်တဲ့ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်, ဦး ဆောင်ဖိနပ်, နားရွက်လုံးကို ဦး ဆောင်သည်